चीनबाट ल्याइने विद्यार्थीलाई परिवारलाई भेट्न नदिइने ! २४ सै घण्टा निगरानी, १४ दिन क्वारेन्टाइनमा - Sidha News
चीनबाट ल्याइने विद्यार्थीलाई परिवारलाई भेट्न नदिइने ! २४ सै घण्टा निगरानी, १४ दिन क्वारेन्टाइनमा
काठमाडौं। चीनबाट उद्धार गरी ल्याइने नेपालीलाई उनीहरूका आफन्तले तत्काल भेट्न नपाउने भएका छन् । ती नेपालीले आफन्त र अभिभावकसँग भेट गर्न कम्तीमा दुई साता क्वारेन्टन स्थलमा बिताउनुपर्नेछ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उनीहरूलाई त्रिभुवन विमानस्थल र क्वारेन्टाइनस्थलमा भेटघाट नगर्न अभिभावकसँग अपिल गरेको हो । सरकारले चीनको वुहान सहरमा रहेका १ सय ८५ नेपालीलाई छिट्टै फर्काउने तयारी गरेको छ । उनीहरूलाई खरिपाटीस्थित क्वारेन्टाइन स्थलमा राखिनेछ ।
आज विमान पठाइँदै
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को मापदण्ड एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमले तोकेको प्रावधानअनुरूप क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल फर्कनुअघि उनीहरूको चीनमै स्वास्थ्य जाँच गरिनेछ । उनीहरूमा सामान्य ज्वरो आएमा वा अन्य लक्षण देखिएमा चीनले पठाउँदैन । उद्धार गरी ल्याइने नेपालीमा भाइरस संक्रमणको लक्षण नदेखिए पनि यात्राका क्रममा देखिन सक्ने समस्याको व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कुनै लक्षण नदेखिएको अवस्थामा उद्धार गरिएका विद्यार्थीलाई बस र एम्बुलेन्सबाट क्वारेन्टाइनमा लगिनेछ । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–७ खरिपाटीस्थित विद्युत् तालिम केन्द्रको भवनमा क्वारेन्टाइन बनाइएको छ । उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन स्थलमा कम्तीमा १४ दिन राखिने छ । एउटा कोठामा बढीमा तीन जना विद्यार्थी रहनेछन् ।
क्वारेन्टाइन स्थलमा स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले २४ सै घण्टा निगरानी गर्नेछ । शंकास्पद रोगको लक्षण देखिएमा तुरुन्त अस्पतालसम्म लैेजान एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ । क्वारेनटाइन स्थलमा निगरानीमा रहँदा कुनै लक्षण देखिएमा वा प्रयोगशाला परीक्षणको प्रतिवेदन पोजेटिभ आउँदासम्ममा तोकिएको अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइने प्रबन्ध मिलाइएको छ । ००
मदन भण्डारी फुटबल सर्‍यो
पछिल्लो समय संसारभर सन्त्रास फैलाइरहेको कोरोना भाइरसका कारण यही फागुन तेस्रो साता तय भएको मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता स्थगित भएको छ । फागुन १५ देखि २४ गतेसम्म आयोजना हुने भनिएको प्रतियोगिता विदेशी आउन नमानेपछि स्थगन गरिएको मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको त्रासका कारण विदेशी टिम नेपाल आएर खेल्न हिचकिचाएपछि प्रतियोगिता केही समयका लागि स्थगन गरेका छौं’, श्रेष्ठले भने, ‘कोरोना भाइरसको अवस्था हेरेर अर्को मिति चाँडै तय गरिनेछ ।’ प्रतियोगितामा मोरिसस, अफगानिस्तान र पाकिस्तानको राष्ट्रिय टोली आउने पक्का भइसकेको थियो । तीन विदेशी टोलीसँग नेपालको राष्ट्रिय टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी छ । अन्नपूर्ण पोस्टमा लखिएको छ ।